Jerry Rand: “Mila hampiroboroboana ny harena ao anaty” | NewsMada
Jerry Rand: “Mila hampiroboroboana ny harena ao anaty”
Maro ny olona, indrindra ny tanora, manana faniriana tsara ao anaty, saingy tsy hain’izy ireo ny manatanteraka na ny mamoaka azy “Azo atao tsara ny mampiroborobo azy”, hoy i Jerry Rand, mpandraharaha sady manana fahalalana amin’ny lafiny fitarihana (leadership).
Manome fiofanana maimaimpoana ny olon-drehetra, indrindra ny tanora, i Jerry Rand, tanora malagasy, manana fahalalana amin’ny fitarihana sy fitantanana. Nambarany fa tsy ho tanteraka ny filazana fa miady amin’ny fahantrana raha tsy fantatra ny antony. Misy karazany roa ny fahantrana: voalohany ny hita sy miseho ety ivelany ary faharoa ny fahantrana ao anaty. Ity farany anefa no tena mila vahana sy iadiana aloha raha tiana hivaha ny ety ivelany. Manana faniriana maro ny tanora, saingy misedra olana satria misy ny sakana, heveriny fa toy ny olana amin’ny vola, fitaovana, sns. Azo tanterahina tsara anefa ny faniriana sy ny drafitrasan’ny tsirairay rehefa fantany ny fampivoarana ny maha olona. Tsy toy ny fomba frankofona mahazatra, mitaky fari-pahaizana na diplaoma, fa amin’ny fijery anglofona, mifantoka amin’ny fanetren-tena sy fikarohana fahombiazana. “Azo atao tsara ny manangana orinasa miainga amin’ny tsy misy”, hoy ihany izy.
Maherin’ny 60 000
Afaka mamaha ny olana, mampivoatra ny ao anatiny avy ny Malagasy, fa tsy hiandry ny vahiny foana. Izay ny antony hanofanany maimaimpoana ny rehetra, indrindra ny tanora, iarahany amin’ny orinasa M. Super Care Madagasikara. Manome torohevitra sy vahaolana hahahomby amin’ny tetikasa, ny orinasa, na ny isam-batan’olona.
Maherin’ny 60 000 ny Malagasy manerana ny Nosy efa nofanin’i Jerry Rand, miara-miasa amin’ny M. Super Care. Fiofanana amin’ny endriny samihafa, toy ny ao anatin’ny fotoana fohy, mitohy, ny fitarihan’olona, ny fahasalamana, toy ny fampiasana ny akora voajanahary, hahatsara ny fahasalamana, ohatra. Omaly, maherin’ny 500 ny nomena fiofanana teto Antananarivo.